TRUESTORY: သတင်းထောက် ကဒ် မပါသည့် DVB သတင်းထောက် လေးလေးမွန် အား အာဇာနည် ကုန်း လုံခြုံရေး အတွက် ပြန်ဆင်းခိုင်းသည့် လုပ်အားပေး သရုပ်ဆောင်ဝေဠုကျော် အပြစ်တင်ခံရ
သတင်းထောက် ကဒ် မပါသည့် DVB သတင်းထောက် လေးလေးမွန် အား အာဇာနည် ကုန်း လုံခြုံရေး အတွက် ပြန်ဆင်းခိုင်းသည့် လုပ်အားပေး သရုပ်ဆောင်ဝေဠုကျော် အပြစ်တင်ခံရ
Sunday, July 20, 2014 Myanmar Express Group 15 comments
ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကို လေးစား သမှုကြောင့် မေတ္တာဖြင့် အာဇာနည်ဗိမ္မာန် လုံခြုံရေး ကူညီပေးသူရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်
ဝေလုကျော်အားအခွင့်ထူးခံDVBသ တင်းထောက် လေးလေးမွန်
( https://www.facebook.com/laylay.mon.7 ) တုန့်ပြန်ချက် (သို့မဟုတ်) စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် မှ ၎င်းကို အခွင့်ထူးမပေး သဖြင့် ပြည်
သူ ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း တုန့်ပြန်ချက်
ဟဲ့ ဝေဠုကျော် ငါ့နာ မည် လေးလေးမွန် ပါ.
လူအလုပ်လူလုပ် ခွေးအလုပ်ခွေးလုပ်ပါ မင်းသား ဝေဠုကျော်
ဒီနေ့တော့ အာဇာနည်နေ့မှာ မင်းသားဝေဠူကျော် အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်.
DVB သတင်းထောက်ကဒ် နင်ပြခိုင်းတဲ့အတွက် နင်လို ကြက်ခြေနီအင်္ကျီဝတ်ပြီး မတန်မရာ သတင်းထောက်ကဒ်ပြခိုင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ခွေးအလုပ် ခွေးလုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်
လူပါးဝလို့ အာဇာနည်ကုန်းပေါ်မှာ ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်.
အာဇာနည်ကုန်းမှာ ကြက်ခြေနီ အင်္ကျီဝတ်ပြီး ပြည်သူတွေကို အော်နေတဲ့
အကောင်ကို ကျမ ကဒီနေရာကနေ အသိပေးတယ်
MPC မှာ သမ္မတနဲ့ တွေ့ပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် ဧက ၂၀ကျော် မြေရပြီး မေမြို့မှာ အနုပညာ စင်တာဆောက်ခွင့်ရတာနဲ့ ခွေးလိုလာမကိုက်နဲ့ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ရင် အမေဆိုပြီး ကုန်း ကန့်တော့
သမ္မတနဲ့တွေ့တော့ အဘဆိုပြီး ဘောမမီဒီယာကိုတွေ့တော့ ခွေးလိုလာမကိုက်နဲ့ နင့်ကိုသနားတယ်
သမိုင်းရှိမှ သွေးရှိမှ လူပါးဝပါ
.နေ့လည် ၁၁နာရီလောက်မှာ မိုးသည်းလာတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေမဝင်ရလို့ ရုန်းရင်းဆန် ခတ်ြ ဖစ်နေ လို့ အာဇာနည်ကုန်းအတက်မယ့်လမ်းမှာ ကျမရဲ့ သတင်းထောက်ကဒ် ကြိုးပြတ်သွား ပြီး ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်.အဲ့ဒီအတွက် လုံခြုံရေးရဲ ဝန်ထမ်းကောင်းတဲ့ လူငယ်တစ်ချို့  က ကျမ ကို ပြန်တွေရင် ဖုန်းဆက်မယ်လို့ ကူညီပါတယ်.ကျမ အာဇာနည်ကုန်းပေါ်ရောက်ချိန် မှာ ပြည် သူတွေ တန်းစီ တက်နေ ပုံ ၊ အလေးပြုနေပုံတွေကို ရိုက်ကူးနေတာပါ.
မင်းသားဝေဠုကျော် က ကြက်ခြေနီအင်္ကျီနဲ့ ပြည်သူတွေကို အလေးပြုပြီး ပြန်ဆင်းဖို့ စိတ်မရှည်စွာအော်နေပါတယ်.ကျမ သူ့ကို မင်းသားမှန်း မမှတ်မိသေးပါဘူး
ပြည်သူတွေနောက် တစ်သုတ်မတက်မှီမှာ ကျမတို့ ရုံးက DVB စတူဒီယို အခန်းမှာ လုပ်တဲ့ မောင်လေး ၂ယောက်က ဒီနေ့နားရက်ဖြစ်လို့ သက်သက်လာပြီး အလေးပြုပါတယ် ကျမကလည်း တကိုယ်လုံးမိုးရေတွေရွှဲနေလို့နှစ်တိုင်း ရေရွှဲပြီး ပြန်ခဲ့ရတာကြောင့် အမှတ်တရ ပုံလေး ရိုက်ဖို့ ကျမ မောင်လေး ၂ယောက်ကို အကူအညီတောင်းချိန်မှာ
မင်းသားဝေဠုကျော် က ကျမကို ခင်ဗျား ဆင်းပါတဲ့
ကျမ က သတင်းရိုက်ကူးနေတဲ့ သူပါလို့ ပြောတော့
မင်းသားဝေဠုကျော်က ကြက်ခြေနီအင်္ကျီဝတ်ထားပြီး ကျမကို သတင်းထောက်ကဒ် ပြပါတဲ့
ကျမလည်း အဲ့အထိကောင်းကောင်းဖြေပါတယ်ကျမ ကဒ် လူတွေနဲ့တိုးပြီး ပျောက်သွားတယ် ကိုဝေဠုရေ လို့ ပြောတော့
နင်ရုပ်ကို ငါတို့အမြဲရိုက်လာတဲ့ DVB သတင်းထောက်
ဒီနေရာမှာ ငါက လာလိမ်စရာမလိုဘူး
နင်က န ဝ တ ထက်တောင်ကြောက်ဖို့ ကောင်းနေတဲ့ မင်းသားဝေဠုကျော်ပါလား
လို့ပြောပြီး ကျမအလုပ် ကျမဆက်လုပ်ခဲ့တယ်
အမှန်ကျမကို လုံခြုံရေး ရဲဝန်ထမ်းတွေကတောင် ကူညီနေတာပါ.
သူလို့ အကောင် ကြက်ခြေနီအင်္ကျီဝတ်ထားပြီး သတင်းထောက်ကဒ်ပြပါ
လုပ်ပိုင်ခွင့်ဘာများရှိလို့ သူ့လိုအကောင်က မီဒီယာကို လာစော်ကားတာလဲ
MPC မှာ သမ္မတနဲ့ အနုပညာရှင်တွေ တွေ့ချိန် မှာ မီဒီယာတွေ ဆန္ဒပြခဲ့တာကိုဒီအကောင် က လာညှိုးသလို လုပ်တဲ့အတွက် ကျမက လည်း အာဇာနည်ကုန်းမှာလည်း တန်အောင်ပြောခဲ့တယ်.
Facebook ကနေလည်း သိအောင်ပြောပါတယ်
DVB က သတင်းထောက် လေးလေးမွန် သို့ .../
DVB ကို အရမ်းအချစ်တွေကြီးတာ ငါလဲ ပါတယ်...... နင်တို့သတင်းဋ္ဌာနတွေက တို့နိူင်ငံကြီးကို ပြသနာ မဖြစ်ဖြစ်အောင် တွန်းပို့ တဲ့ နေရာမှာ ဆရာ့ ဆရာကြီးတွေ မို့....
အဲတာကြောင့် နင်တို့ ကို ငါ စောက်ရမ်း ချစ်တာ.......
တစ်နေ့မီဒီယာတွေ နဲ့ အခွင့်အရေးရရင် ကောင်းကောင်းကြီးတွေ့ ချင်ပါသေးတယ်...။
မီဒီယာ မီဒီယာလိုနေ.... သောက်အခွင့်အရေးမလိုချင်နဲ့....
လူတွေ အရမ်းများနေတဲ့ အာဇာနည်နေ့ မှာ အာဇာနည်ကြီးတွေ ကို အလေးပြုဖို့မိုးထဲ ရေထဲကနေ စောင့်နေကြတဲ့ အာဇာနည် ကုန်းကို မတက်ကြသေးတဲ့ နောက်မှာ ကျန်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးကိုလဲ ထည့်ပြီး တွက်ရသေးတယ်....။
တစ်သုတ်တက် တစ်သုတ်ဆင်းပြီး အာဇာနည်ကြီးတွေ ကို အရိုအသေပြုနေတဲ့ အချိန် နောက်လူတွေ တက်လာနိုင်ဖို့အရင်တစ်သုတ်က လူတွေ ဆင်းခိုင်းတာ ဘာမှ မမှားဘူး..။ ပြည်သူတွေ အဆင်ပြေချောမွေ့ ဖို့မင်းသားဝေဠုကျော် ကူညီနေတာပဲ ဖြစ်တယ်..။
သတင်းထောက်လို့ပြောလို့ သတင်းထောက်ကဒ်ပြ ခိုင်းတာ ဘာမှ မမှားဘူး...။ သတင်းထောက်ကဒ်မပြနိူင်လို့ဆင်းခိုင်းတာနဲ့စိတ်ဆိုးရင် လဲသာသေကွာ.....ရှင်းတယ်.....။ မိုးထဲလေထဲမှာ ကျန်နေသေးတက် အာဇာနီကုန်းကို မတက်ရသေးလို့ရပ်စောင့်နေကြရတဲ့ လူအုပ်ကိုမှ အားမနာ .....။
မီဒီယာတွေ သောက်အခွင့်အရေးတွေ သိပ်မလိုချင်နဲ့၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အခွင့်ထူးခံလဲ မှတ်မနေနဲ့၊ သူများကျတော့ န၀တ ထက် ဆိုးတယ် ပြောတယ်..။သူလဲ ဘာထူးလဲ အခွင့်အရေးလိုချင်ပြီး ၊ အခွင့်ထူးခံဖြစ်ချင်နေတဲ့ စိတ် အာဏာရှင်သောက်ကျင့်ပဲ..။
DVB မီဒီယာတွေ စောက်ဖင်ခေါင်း သိပ်မကျယ်ကြနဲ့မအေဘေးတွေ မျက်စိနောက်တယ်..။ကိုယ်စောက်သုံးမကျလို့အဆင်မပြေဖြစ်တာကို ၊ ကိုယ်အဆင်မပြေတိုင်း တစ်ဖက်လူကို တိုက်ခိုက်ဖို့မီဒီယာကို လက်နက်လို သုံးပြီး သောက်ဖောင်းထုရင် အမျိုးသားရေး သမားတွေ နဲ့တွေ့ မယ်..။
အခကြေးငွေ မယူပဲ အသိစိတ်ဓါတ်အပြည့်နဲ့ကူညီချင်တဲ့ စိတ်ရှိတဲ့ အနုပညာသမားတွေ ကို မစော်ကား ၊ မရမ်းကားချင်နဲ့။ နင်တို့ DBVကမီဒီယာသမားတွေထက် စိတ်ဓါတ်တွေမှာ သူတို့ တွေက ပိုပြီး မွန်မြတ်တယ် ဆိုတာ နားလည်ပါ... DVB က လေးလေးမွန်...။
ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိ ၊ ဒါပဲ ပြောချင်တယ်....။
သေချာတာကတော့ နင့်တို့ ကို ငါ စောက်ရမ်း ချစ်တာ
ဟဲ့ ကောင်မ DVBသတင်းထောက် လေးလေးမွန်
ဖာသည်မဖြစ်နေပါစေ တာဝန်က တာဝန်ပဲကွ
ပွဲမှာ နင့်သတင်းထောက်ကဒ်ကို နင်သေခြာသိမ်းထားလေ..တာဝန်အရ စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာ မပြနိုင်ရင်တာ့ ဘယ်သူပဲဖြစ်နေပါစေ တာဝန်အရ လုပ်ရတာပဲ,
ဒါကို နင့်လို သတင်းထောက် စောက်ဆင့်က စိန်ခေါ်ရအောင် နင်က ဘာကောင်မမို့လဲ?
နင်တို့ DVB သတင်းဌာနဆိုတာ ဘာမို့လို့လဲ?
ခိုင်းတာလုပ်ရတဲ့ အမျိုးယုတ်ကုလားကျွန် သတင်းဌာနက သောက်ရှက်မရှိ နင်က စိန်ခေါ်နေတာ အံတာပဲ.,
မသာမ ငါနဲ့မတွေ့တာ ကံကောင်း
ငါနဲ့တွေ့လို့က နင့်လို DVBသတင်းထောက် စောက်ဆင့်လောက်ကို သောက်ခွက်ကြီးဖျက်ကန်တယ်,
ငါကလဲ facebook ကနေစိန်ခေါ်တယ်
Credit to- စဆဇဈ
Posted by TRUE STORY at 8:22 AM